26-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray? | FooreNews
Home Barnaamijo 26-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray?
26-Ka November Maanta Oo Kale Maxaa Dunida Soo Maray?
26-kii November 1382-kii waa maalintii Suldaan Barquuq Bin Aanis uu la wareegay xukunka wadanka Masar halkaana ku aasaasay dawladdii lagu magacaabi jiray Mamaaliik-ta labaad.
26-kii November 1830-kii maanta oo kale waa maalintii Ciidamada Faransiisku ku fashilmeen in ay qabsadaan ama dhexda u galaan magaalada Al-baliida ee wadanka Aljeeriya kadib markii ay iska caabin ba’an kala kulmeen dadka magaaladaasi ku nool, waana mudadii uu socday dagaalkii Faransiiska iyo Aljeeriya.
26-kii November 1941-kii maanta oo kale waa maalintii Ciidamada wadanka Japan ee uu Hogaaminayay Shushi Nagumo ay u jihaysteen ee ay weerarka ku qaadeen dekedda Pearl Harbor dagaalkii labaad ee dunida.
26-kii November 1950-kii maanta oo kale waa maalintii ciidamada waddanka Shiinuhu gudaha u galeen wadanka Woqooyiga Kuuriya si ay u taageeraan iyaga oo ka hor tagayay is-bahaysigii Kuuriyada Woqooyi iyo Maraykanka waxaanay ahayd wakhtigii uu socday dagaalkii Labada Kuuriyood isaga oo Shiinuhu doonaya in uu dheelli tiro dagaalkaasi oo uu la saftay Woqooyiga Kuuriya.
26-kii November 1960-kii maanta oo kale waa maalintii Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysaa xorriyadda buuxda siisay wadanka ku yaalla woqooyiga Afrika ee Mauritania, inkasta oo maalmahaasi wadanka Morocco doonayey in lagu wareejiyo Mauritania oo ay iyadu maamusho dhulkeedana ku darsato balse waxa dalabkaasi Morocco ka soo horjeestay Qaramada Midoobay oo gobonimo buuxda siisay Mauritania oo caasimadeedu tahay Nouakchott.
26-kii November 1962-kii maanta oo kale waa maalintii Axmed Bin Bella uu soo dhisay dawladdii ugu horraysay ee ay yeelato waddanka Aljeeriya kadib markii ay xornimadeeda ka qaadatay Faransiiska.
26-kii November 1973-kii maanta oo kale waa maalintii Waddanka Mauritania uu sida buuxda uga mid noqday Jaamacadda Dalalka Carabta.
26-kii November 1988-kii maanta oo kale waddanka Maraykanka ayaa diiday in uu fiise dal ku gal ah siiyo Madaxweynihii hore ee xukuumadda reer Falastiin Rabbi ha u naxariistee Yaasir Carafaat kaasi oo doonayay in uu maalintaasi khudbad ka jeediyo Fadhigii Qaramada Midoobay. Maalmahaasi Maraykanku waxa uu si cad uga hor yimid siyaasadda Yaasir Carafaat.
26-kii November 1990-kii maanta oo kale waa maalin ay shacabka Yuhuudda iyo Masaariduba si wanaagsan u xasuustaan. Waa maalintii Askari Masri ah oo lagu magacaabo Eyman Xasan uu weerar culus ku qaadday Gaadhi Jiib ah iyo laba bas oo siday askar iyo shacab Yuhuud ah kuwaasi oo marayay meel u dhaw xuduudda ay wadaagaan Masar iyo Yuhuuddu. Eyman Xasan oo ka tirsanaa ciidamada Milatariga Masar waxa uu weerarkaasi ku dilay tiro Yuhuud ah iyo dhaawac badan isaga oo ugu aar gudayay dhimasho Yuhuuddu maalmahaasi ka gaysatay dhulka reer Falastiin.
26-kii November 2008, waa maalintii silsilad weeraro is qarxin ahi gilgileen Caasimadda Ganacsiga wadanka Hindiya ee Mumbai. Waxa qaraxyadaasi lala beegsaday Madaar diyaaradeed, Huteelo waaweyn, goobo dalxiis iyo xarun tareen oo dhammaantood ku yaalla Mumbai waxaana maalintaa la qabsaday tiro dad ah oo la afduubtay markii dambena la laayay. Waxa weerarkaasi sheegatay koox xagjir ah oo Muslimiin ah oo Hindiya ku kacsan. Maalintani waxa ay maalin madaw u tahay shacabka deggan magaalada Caanka ah ee Mumbai oo ah magaalo ganacsi oo ay degan yihiin dad aad u ladan oo dabaqadda sare ah, waxaanay maalintan ku xusaan dareen murugo oo werwer leh.
…..La Soco malmo kale
Previous PostWasaaradaha Warfaafinta, Boosaha Iyo Macdanta Oo Noqday Kuwa Ugu Liita Qiimayntii Maamul Wanaagga Iyo Ilaalinta Hantida Qaranka Next Post10 Waddan Oo Khubarada Adduunku Saadaalisay In Mustaqbalka Dhaw Laga Waayi Doono Khariidadda Adduunka